Ukuphakanyiswa Kwemiklomelo ye-XXX Salon de Barcelona | Izincwadi Zamanje
Abaphakanyiselwe ama-XXX Barcelona Comic Fair Awards sebemenyezelwe. Iqiniso ukuthi ngokunqunyelwe ezigabeni ezintathu, ukuhlaziywa okungenziwa ngokuqokwa ngakunye ngabagxeki kanye nomlandeli ojwayelekile kungaba okuphelele kakhulu. Kube khona indawo yabo yokufaka uhlu olufingqiwe lwamatshe ayigugu abesohlwini lwezintandokazi: IHero, iDublinés, iThe Wild Girl, i-Atlas ne-Axis Saga. Abanye abafika nebhendi elimangazayo kumamaki wokucaphuna: Ukuzidela kwesisebenzi sasehhovisi laseJapan noma Umvikeli. Futhi-ke, ingxenye ejwayelekile kaPaco Roca, kulokhu enezinkumbulo zendoda egqoke izingubo zokulala. Angicabangi ukuthi kulo nyaka uzowuthatha. Kungaba, ngokubona kwami, intukuthelo. Engikuthandayo yiThe Hero ne-Atlas & Axis Saga ngo-50%. Esigabeni somsebenzi wangaphandle, kukhona u-Arzak umlindi ongaba intandokazi uma ufuna ukuthulela isigqoko uMoebius ngesikhathi sokufa kwakhe, yize engikuthandayo kunguHabibi futhi ngaphezu kwakho konke uPolina. Ngokuqondene nama-fanzines, ngoba awakwazanga ukungena njengama-Synonyms of Profit, abantu baseThermozero benza umsebenzi omuhle futhi ngingajabula uma bengathatha lo mklomelo:
Imiklomelo ye- 30 I-Barcelona International Comic Fair yibo abazoba nesabelo esikhulu kunazo zonke emlandweni womncintiswano. Umklomelo Omkhulu weSalon nendondo ye Umsebenzi Ohamba phambili Umbhali waseSpain bane, ngokulandelana, ama-euro ayi-10.000, ngenkathi umklomelo we-Best Fanzine ungama-1.500 euros. Ngaphezu kwalokho, sibonga uxhaso lwe- Isisekelo seDivina Pastora, the IsAmbulo Author Award izogcinwa ngokunikezwa kwama-euro angama-3.000. Isigaba se-Best Work by Author Foreign siyaqhubeka ngaphandle komklomelo wemali.
Yonke imiklomelo isiyonke ngama-euro angama-24.500 uma kuqhathaniswa nama-20.400 ngonyaka owedlule. Ukukhuphuka kwamaphesenti angama-20. Yize kunenkinga, iSalon iyanda, ngezinsizakusebenza zayo nangokusebenzisana kweDivina Pastora Foundation, ukuzibophezela kwayo ekuzuzeni ithalente lababhali bethu.
Esigabeni sokuqala sokuvota, ochwepheshe abavela emkhakheni wamahlaya bakhethe abaphakanyiselwe imikhakha ye-Best Work ngu-Spanish Author 2011, Best Work by Author Foreign and Best Fanzine. Nalu uhlu lwabaphakanyisiwe:
UMSEBENZI OPHAKANYISWE KAKHULU WOMBHALI WESpanishi OWENZISWE NGO-2011
I-Adventures yesisebenzi sasehhovisi laseJapan, nguJosé Domingo (Bang Ediciones)
I-Dublinés, ngu-Alfonso Zapico (Astiberri Ediciones)
IHero, nguDavid Rubín (Astiberri Ediciones)
Españistán, ngu-Aleix Saló (Ediciones Glénat, manje ongu-Editores de Tebeos, SL)
I-Fagocitosis, kaMarcos Prior noDanide (u-Ediciones Glénat, manje ongu-Editores de Tebeos, SL)
Imlando yendawo, nguGabi Beltrán noBartolomé Seguí (Astiberri Ediciones)
Intombazane yasendle, kaMireia Pérez (Ediciones Sins Entido)
Umvikeli, nguKeko (Edicions de Ponent)
I-Atlas & Axis saga, kaPau (Dibbuks)
Izinkumbulo zendoda egqoke amaphijama, nguPaco Roca (Astiberri Ediciones)
UMSEBENZI WABANTU BANGAPHANDLE OQOKIWE WAKHISHIWA ESPAIN NGO-2011
U-Arzak oqaphile, nguMoebius (I-Editorial Standard)
Amakhilomitha ayizinkulungwane ezinhlanu ngomzuzwana, nguManuele Fior (Ediciones Sins Entido)
IziKronike zaseJerusalema, nguGuy Delisle (Astiberri Ediciones)
Little Christian, nguBlutch (Umhleli weNorma)
UFrank, nguJim Woodring (uFulgencio Pimentel Ediciones)
Habibi, nguCraig Thompson (Astiberri Ediciones)
Ukuyikhokhela, nguChester Brown (Ediciones La Cúpula)
UPolina, nguBastien Vivès (Diabolo Ediciones)
I-Quai d'Orsay, ebhalwe ngu-Abel Lanzac noChristophe Blain (Wokuhlela uNorma)
Okunobuthi, nguCharles Burns (Random House Mondadori)
ISITJHUMI ESIKHULU KAKHULU SE-SPANISH 2011
Kusukela ngoLwesithathu, Mashi 14, isigaba sesibili sokuvota ngomsebenzi siqala, siphele ngoLwesine, Ephreli 19. Kulesi siwombe sesibili, ochwepheshe bazovota kumuntu oqokiwe emkhakheni ngamunye kule mikhakha emithathu. Ngaphezu kwalokho, kufayela le- Umklomelo Omkhulu weComic Fair, ekuqapheleni umkhondo weminyaka engaphezu kwengu-25, ochwepheshe bangaphakamisa amagama afinyelela kumahlanu ngesimo sokuthi abawutholanga ngaphambili lo mklomelo. Umbhali onamavoti amaningi nguyena ozonqoba.
El IsAmbulo Author Award exhaswe yi- Isisekelo seDivina Pastora izokhethwa ngqo yijaji labachwepheshe bamahlaya abaziwayo abakhethwe yilelo bhizinisi futhi umklomelo uzonikezwa emcimbini wemiklomelo 30 I-Barcelona International Comic Fair. Bonke labo babhali abashicilele umsebenzi wabo wokuqala wobumbano noma owuchungechunge ngo-2011, benombandela wokuthi bazalwa kusukela ngo-1976 kuya phambili, bazokwazi ukuthola lo mklomelo. I- Isisekelo seDivina Pastora Icabanga phakathi kwezinhloso zayo eziyisisekelo ukwenza uqeqesho nemisebenzi yezemfundo, yezemfundo namasiko.
Abalandeli bazokwazi ukuvota ngqo kuleyo abayicabangayo Amahlaya Ahamba phambili zonyaka ka-2011, kungaba ngumbhali waseSpain noma waphesheya. Ukuthi ivoti lizokwenziwa ngewebhusayithi ye- I-FICOMIC phakathi kuka-Mashi 19 no-Ephreli 16.
El 30 IBARCELONA INTERNATIONAL COMIC SHOW Izobanjwa kusukela ngoLwesine 3 kuya ngeSonto mhlaka 6 Meyi esigodlweni inombolo 8 ka UFira de Barcelona. Ngiyakukhumbuza ukuthi isikhathi sokufaka isicelo sokuqinisekiswa kanye nezingxoxo manje sesivuliwe. Lesi sikhathi sizophela ngoMsombuluko ka-Ephreli 23, usuku okungeke kusacutshungulwa ngalo ukuphasa. Ukucela ukugunyazwa kuyadingeka ukuthi unikeze yonke idatha yalokhu okuphakathi, kanye nokufakwa okwenziwe ngonyaka odlule. Uma kungunyaka wokuqala oya kuwo Salón, kuyadingeka ukuthumela umsebenzi osanda kushicilelwa ohlobene namahlaya noma isiko lilonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » Ukuphakanyiswa kwemiklomelo ye-XXX Salon de Barcelona
Ngikuthande kakhulu !. Manje ngiphakathi kukaThermozero nawe ...
'Ubusuku Bokugcina beTitanic' nguWalter Lord